DF Oo Ansixisay Hindise Sharciyeedyada Kufsiga iyo Nakhshadeynta Magaalooyinka | SAHAN ONLINE
DF Oo Ansixisay Hindise Sharciyeedyada Kufsiga iyo Nakhshadeynta Magaalooyinka
MUQDISHO -Shirkii gollaha wasiiradda Federaalka oo maanta arbaco ah lagu qabta caasimadda Muqdisho ayaa lagu ansixiyay DFSoomaaliya oo caasimadu u horaysay. Shirka waxaa kaloo warbixino ka jeediyay qaar kamid ah gollaha wasiiradda iyo Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed.
Dood iyo falaqeyn dheer ka dib gollaha wasiiradu waxay isla garteen in la ansixiyay Sharciga Dambiyada Kufsiga oo ay golaha hor keentay Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuq Insaanka Soomaaliya, sidoo kalena waxay meelmariyeen ansixita Sharciga Nakhshadeynta Magaalooyinka oo kulankii hore ay soo gudbisay wasaaradda Hawlaha Guud iyo dib u dhiska, waxayna sheegeen golluhu in sharicahn uu baahi badan dalku haatan u qabo.
Taliyaha Booliiska Federaalka S.G. Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko, oo ka hadlay kullanka ayaa gollaha wasiiradda uga warbixiyay Qorshaha Suggidda Amniga Caasimadda muqdisho , ee lagu magacaabyo (SAMA), isaga oo sheegay in ay meel wanaagsan marsiinayaan, tallaabooyin wanaagsanna ay qaadeen tan iyo markii la bilaabay dar-dar gelinta Sugidda Amniga Caasimadda.
dhan kale, Wasiirka Qorsheynta XFS Jamal Maxamed Xasan, ayaa ka war bixiyay qorshaha soo ka bashada abaaraha iyo Fatahaadaha. Wuxuuna ku dheeraaday soo bandhigidda dhibaatooyinka laga dhaxli karo abaaraha soo noq-noqda iyo sidoo kale duufaantii dhawaan ku dhufatay qeybo kamid ah dalka.